‘मर्न तयार भएरै जोगाएँ भाइ र बैनीलाई’ – YesKathmandu.com
चार जना बच्चाहरुलाई घरमा छोडेर कालिका गाविस ९, सिन्धुपाल्चोककी सम्झना पहरी घाँस काट्न गएकी थिइन् । बैशाख १२ गतेको महाभुकम्प आएको उनले चालै पाइनन् । आफूसँगै घाँस काटिरहेकी माइली देउरानी अञ्जु पहरीले ‘भुईचालो आयो’ भनेर चिच्याए मात्रै उनले पत्तो पाइन् । हत्तपत्त रुख समातेर बसिन् ।
आफु त जोगिइन्, तर घरमा रहेको छोराछोरीहरु के भयो भनेर उनको मन आत्तियो । श्रीमान् पनि गाँउको मिलमा काम गर्थे, घरमा थिएनन् । भुईचालो रोकिनसक्दै हस्याङ्फस्याङ घरतिर दौडिइन् । घर भत्किइसकेको थियो । एकछिन त सम्झनाको होसहवास उड्यो । घरभित्र भएको अन्न, कुखुरा सबै पुरिएछ । घरमा दुई छोरा र दुई छोरी छोडेर गएकी थिइन् । धन्न, भत्किएको घरबाहिर तीन जना बच्चाहरु देखिए । उनको मन केही शान्त भयो। तर, एक जना छोरा भने अझै देखिएन । अत्तालिएर उनले घरको भग्नवशेषमा खोज्ने प्रयत्न गरिन, सम्भवनै भएन ।
‘घरमा बच्चाहरु थिए, घरले पुरिसक्यो होला भनेर रुदै दौडिएर आए । घर त भत्किसकेको थियो’–सम्झनाले महाभुकम्पलाई स्मरण गर्दै भनिन्–‘अन्न, कुखुरा सबै पुरिएको थियो, तीन जना बच्चा देखे, मन केही शान्त भयो । एउटा छोरा मात्रै थिएन ।’ घाँस काट्न जानुअघि उनले ७ बर्षीय ठुली छोरी सुजिता, ६ बर्षका सुजन, ४ बर्षका सुदिप र एक बर्षकी सुनिता पहरीलाई छोडेर गएकी थिइन् । ती मध्ये ४ बर्षीय सुदिप मात्रै थिएनन् । ठुली छोरी सुजिताले चलाखी नगरेको भए चारैजना घरले पुरिने थिए । धन्न, सुजिताले ६ बर्षका सुजन र एक बर्षका सुनितालाई साथमा लिएर हतपत घरबाट बाहिरिएछन् । ‘सुदिपलाई पनि तान्न खोजिछ, तर मानेनछ । उसलाई घर भत्किएर पुरेछ’–आमा सम्झनाले ठुली छोरीलाई देखाउदै भनिन्–‘यसले त्यति नगरिदिएको भए सबै स्वाहा हुनेथियो।’
कालिका गाविसमा ९ जनाको मृत्यु भएको थियो । ती मध्ये वडा ९ मा एक जना बालकको मात्रै मृत्यु भएको थियो । ती अभागी तिनै सम्झना पहरीका ४ बर्षीय छोरा सुदिप थिए । भुइचालोले जमिन हल्लिन थालेपछि दिदीले तान्न खोज्दा मानिदिएको भए उनी पनि जोगिने थिए । दिदी सुजिताका अनुसार भुईचालो आउनुअघि उनीहरु चारै जना घरमा गुन्द्री ओछ्याएर खेल्दै थिए । जमिन हल्लिन थाल्यो, घरको माटो खस्न थाल्यो । अत्तालिएर सुजिताले एक बर्षीय बहिनी बोकिन । अर्को ६ बर्षीय सुजनलाई हातले समातेर तानिन् । चार बर्षीय सुदिपलाई पनि आइज भन्दै बोलाइन्, तर उसले दिदीले के भनेको भेउ नै पाएनन् । घर गर्लम्म लडिहाल्यो । ‘सानो बहिनी र भाईलाई बाहिर ल्याए, सुदिपलाई पनि यता आइज भने, मानेन । घर लडिहाल्यो’–उनले भनिन् ।
पहरी जाति त्यसै पनि अति पिछडिएको र गरिब छन् । त्यसमाथि सम्झनाको परिवारको सम्पत्तिको नाममा केही छैन । उनीहरु अर्काको बारी कमाएर बसेका थिए । साहुले बस्न दिएको घर पनि भुकम्पले भत्काइदियो । बोरा, जस्ता र पाल ओढेर बसेका छन् । ‘हाम्रो त केही छैन, अब कसरी बाच्ने रु कतैबाट सहयोग पाए हुन्थ्यो’–सम्झनाले भनिन्।
One thought on “‘मर्न तयार भएरै जोगाएँ भाइ र बैनीलाई’”
God bless you. May God give strength to all affected.
धर्मनिरपेक्षता माग गर्न पुगेकालाई प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनुहुन्न’
मोर्चाको जुलुसमा खटिएका प्रहरी हवल्दार मृत फेला
सरकारद्वारा १६ सहसचिवको बढुवा